Taariikhda My Butros » 7 Fikradaha Dhulku gooni ah Date A
Dating, waxaan ku soo maray dhammaan taariikhaha wanaagsan qaar ka mid ah, qaar ka mid ah kuwa daymada / Gaariisa, qaar ka mid ah kuwa qiimo leh dhiibi xun iyo rajeynayaa qaar ka mid ah kuwa wanaagsan / aad u xiiso badan. Sidaas waxa ka dhigaysa taariikh cajiib ah? Dabcan qofka aad la kulmeysa waxay leedahay wax badan in la sameeyo waxa la, Si kastaba ha ahaatee waxaan u malaynayaa in ay jiraan wax ka waxa ay u badan tahay in. Waxaan qabaa wixii dhab ahaan ka dhigi kara taariikh taagan yahay wadaago waayo-aragnimo aad wada leeyihiin, iyo xidhiidhka ka tani waxay keentay.
Kulan ee Baarka ama baabka ee taariikhda hore waa hadal haynta aad u iyo halka ay casho ah waa nice, waxaa ka heli kartaa caajis marka aad u samayn Todobaad walba habeen taariikh leh xaaskaaga. Haddii ay tahay taariikh koowaad ama 'habeen taariikhda' si joogto ah todobaadle ah run ahaantii waxaa dhallaanka by gatay wax madadaalo iyo gacmaha ku.
Ma ogtahay in waaya-aragnimada la wadaago abuuro xiriir ka dhexeeya dadka? Waxaa ka shaqeeya sida tan. Marka aad leedahay nooc kasta oo waayo-aragnimo waxa aad sidoo kale yeelan doontaa dareenka ah in dhaaftid waxaa la. Markaa tusaale ahaan haddii aad abseil off gabiga ka badan tahay in aad la kulmi doonaan qaar ka mid ah isku yaacsanaan, laga yaabee argagixiso, adrenaline iyo sare. Haddaba markii aan lahayn waayo-aragnimo la wadaago qof kale, oo waxaan ku dhaxjiraan dareenka mid ah wada, tan waxay abuurtaa bond ah. Waayo, mid wax aan la xidhiidhi karaa mid kale oo ay wax ka si ay uga hadlaan, Si kastaba ha ahaatee iyadoo haweenka ay jirto sabab dheeraad ah oo la taaban karo. Haddii ay dumarka la wadaago (wanaagsan ama xiiso leh) oo khibrad u leh qof kiimiko ah oo lagu magacaabo Oxytocin dhab badalaa sii daayay in jirkeena. Tani waa hormone lagala kulmo oo ay ka dhigi doonaa noo dareemaan ku dhawaato qof aan soo martay oo ay la. Hadda lamaane ku leh qaar ka mid ah adrenaline wax xiiso leh samaynaya, iyo qaar ka mid ah endorphins iyo serotonin ka samaynayaan wax madadaalo, waana isku jira oo quruxsan haad ah. Marka aad eegto waxa at sidan waa ay fududahay in la arko sida aan ku dhici kartaa qof Waxaan taariikhda.
Sidaas sida aan u codsan kartaa si fikradda ah shukaansi? Easy, aad rabto in la qorsheeyo taariikhaha in la abuuro waayo-aragnimo in la wadaago oo ka mid ah xiiso leh iyo element oo xiiso leh. Warka wanaagsan waa in sida caadiga ah, dadka maalin kasta oo aan u qaabeeyaan-eg weli abuuri kartaa nooc ka mid ah waayo-aragnimada. Oo tanu waxay kuu siinaya gees ah ka badan tartamaya. Sidee u awood badan oo soo jiidasho leh si ay u awoodaan si ay u abuuraan noocan oo kale waayo aragnimo, iyo wixii hab fiican oo ah inay soo gabagabeyso jiidashada. Marka aynu ka dareento shucuurta galiyay iyo lagala kulmo qof kale dareemaan aan soo jiidatay iyaga.
Gunnada kale ee aad doorato wax u gaar ah iyo madadaalo u ah taariikhda waa in u burburin doonaa barafka, kaas oo si gaar ah muhiim haddii ay taariikh ugu horeeyay. Marka aad ka soo shaqeeya sidii ay u wada kariyo pizza a aadan haysan waqti badan u dareemayaa sirgaxan. Oo ogolaan karaa fursado qaadan jirka iyo flirty la mid kale. Waxaa badanaa dhib ku tahay inuu taabto qof aad taqaan marka taariikhda ah ee baar, si kastaba ha ahaatee marka aad qabanayso wada wax ku ool ah u fududahay. Haddii aad qabto in ay ka wada shaqeeyaan hawsha in uu xitaa ka fiican, xusuusnow in waayo-aragnimo la wadaago waxay abuurtaa xiriir. Oo haddii hawshaada aad xiiso iyo aad ka heli Naftiinna qosol ku caawin doonto labada inaad nasato.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikrado aad u:
Wada Karinta - Wada Karinta noqon kartaa badan oo xiiso leh. Sidoo kale in aad cashar karinta ka qabsan kartaa ama kariyo wax guriga (ahayna ma ahan taariikh koowaad).
Weelka dhoobada - Mar ay tani tahay gacmaha ah oo ku aadan xulashada iyo wuxuu noqon karaa mid aad u sexy. Ka fikir filimka 'Ruuxa' ah. Oo waxaa qayb weyn waa in ay jiri doonaan keepsake ah laga bilaabo taariikhda in qaab kasta oo aad sameeyey. Kaliya u hubso taariikhda ogyahay inay xirtaan dhar duug ah.
Socodka adiga oo wata muuqaal la yaab leh - Waxaan la hadlay oo ku saabsan abuuraya waayo-aragnimo la wadaago iyo haddii aadan haysan waqti badan ama aad ku jirto miisaaniyad socod wada noqon kartaa fiican. Dadka inta badan waxaa u sahlan in aad isku dejiso oo la hadal marka ay ku dul. Oo haddii aad doorato meel in uu leeyahay muuqaal fiican tan ku dari kartaa in ay waayo-aragnimo ah. Mid ka mid ah taariikhaha ugu fiicnaa ee aan abid haysteen gaaray likaha duurjoogta kaynta ah. Nasiib wanaag ninka waxaan ahaa shukaansi ogaa kuwa ahaayeen cuni karo!
Wax ku dhiirato sida abseiling ama zorbing - Wixii junkies adrenaline tani waa kaamil. Kaliya u hubso taariikhda ogyahay waxa aad qorshaynaysid iyo kor u yahay, waxaa ka hor inti aadan!
Tag xoolaadka la daawado - Wax kasta oo la xoolaha waa weyn. Salaaxdid xayawaan ku gaadhi kartaa in aad kor u diirsada oo in niyadda loogu salaaxdid midba midka kale. Plus waxay ka caawinaysaa in ay sii daayaan hormoonka in dhammaan muhiim oxytocin.
Horse fardaha - Fuushaan Horse run ahaantii noqon kartaa qosol ah, iyo sidoo kale caqabad ku ah, haddii aadan waxaa ay isku dayeen hor. Mar kaliya hubi wehelkaaga waa tartan kahor intaadan sida uusan qof walba.
Art bandhig - Haddii aad tahay labada sidan oo kale u samayn karaa in uu waayo-aragnimo la wadaago cultured oo heer sare ah. Bandhigyo Photo noqon kartaa madadaalo aad u.